वास्तविक श्रद्धाका पात्र (महाभारत–चिन्तन) – Chitwan Post
वास्तविक श्रद्धाका पात्र (महाभारत–चिन्तन)
–डा. मतिप्रसाद ढकाल
प्रकाशित मिति: बुधबार, अशोज १५, २०७६
युधिष्ठिरले भीष्मसँग मृत्युविषयक प्रश्न सोध्छन् । भीष्मले नारदद्वारा व्यक्त गरिएको मृत्युसम्बन्धी उपाख्यानका माध्यमबाट युधिष्ठिरको जिज्ञासा शान्त गर्छन् । प्राचीन समयमा अकम्पन नामक एउटा राजा थिए । युद्धका क्रममा उनको रथ नष्ट भएका कारण उनी शत्रुको वशमा परे । उनको हरि नामक एउटा पुत्र थियो र ऊ बलमा भगवान् नारायणसमान भए पनि त्यस युद्धमा शत्रुहरुले उसलाई मारे । शत्रुको पराधीन भएर अकम्पन राजाले पुत्रको शोक गर्न थाले । शोकमग्न भएर शान्तिको उपाय खोजिरहेका बेला नारदजी टुप्लुक्क त्यहीँ आइपुगे । नारदजीसँग राजाले आफ्नो सारा वृत्तान्त सुनाए । त्यसै सन्दर्भमा नारदले मृत्युसम्बन्धी प्राचीन उपाख्यान प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रजाहरुको सृष्टि गर्ने बेलामा ब्रह्माले जब अनेकौं प्राणीहरुको सृष्टि गरे तब तिनको संख्या अत्यधिक भयो । यति धेरै प्राणीहरु हुनु ब्रह्माजीका लागि सह्य हुन सकेन । त्यतिबेला जन्तुहरुले नभरिएको कुनै पनि ठाउँ थिएन र सारा त्रिलोक जीवजन्तुद्वारा ढाकिएको थियो ।
प्राणीहरुले सास लिन पनि असम्भवजस्तै भएको थियो । त्यसपछि ब्रह्माजीका मनमा प्रजाहरुको संख्या घटाउने वा संहार गर्ने चिन्ता उत्पन्न भयो । उनले धेरै समयसम्म सोचे तर संहारको कुनै उपयुक्त कारण उनका मनमा आउन सकेन । त्यसपछि रोषवश ब्रह्माजीका नेत्र आदि इन्द्रियहरुद्वारा अग्नि प्रकट भयो । त्यस अग्निका माध्यमले ब्रह्माले सम्पूर्ण दिशाहरुलाई दग्ध गर्न प्रारम्भ गरे । फलस्वरुप त्यस आगाले स्वर्ग, पृथ्वी, अन्तरीक्ष र चराचर प्राणीहरुसहित सम्पूर्ण जगत्लाई डढाउन थाल्यो र उनको क्रोधका वेगले सबै स्थावर तथा जङ्गम प्राणीहरु दग्ध भए । त्यो देखेर भगवान् शिव ब्रह्माजीको शरणमा गए । त्यसपछि ब्रह्माजीले शिवसँग मैले तिमीलाई वर पाउन योग्य सम्झन्छु, भन आज मैले तिम्रो कुन इच्छा पूरा गरुँ ? तिम्रो मनमा जुन मनोकामना छ त्यसलाई मैले पूर्ण गर्नेछु भनेर शिवजीलाई वर माग्न आग्रह गरे ।
प्रजावर्गको रक्षाका लागि प्रार्थना छ भन्दै शिवजीले ब्रह्माजीसँग प्रजावर्गमाथि क्रोध नगर्न आग्रह गरे । म प्रजामाथि क्रुद्ध छैन र प्रजावर्गको विनाश होस् भन्ने पनि मेरो इच्छा छैन भन्दै ब्रह्माजीले ‘लाघवार्थं धरण्यास्तु ततः संहार इष्यते’ (महाभारत १२।२५७।३) अर्थात् पृथ्वीको भार हल्का गर्नका लागि नै प्रजाको संहारको आवश्यकता छ भन्ने कुरा व्यक्त गरे । पृथ्वीदेवी भारले पीडित भएर उनले सदैव मलाई प्रजाको संहारका लागि प्रेरित गरिरहेकी छन् किनकि संसारको भारका कारण यो संसार समुद्रमा डुब्न लागिरहेको छ । जब अत्यन्त विचार गर्दा पनि पृथ्वीमा बढेको प्रजाहरुको संहारको कुनै उपाय मेरा मनले प्राप्त गर्न सकेन तब मलाई क्रोध आएको हो भन्ने कुरा ब्रह्माजीले शिवजीसँग व्यक्त गर्छन् ।
संहारका लागि हजुरले क्रोध नगर्नुहोस् र प्रजासँग प्रसन्न हुनुहोस् । तपाईं क्रुद्ध हुँदा स्वेदज, अण्डज, उद्भिज र जरायुज चारै प्रकारका प्राणीहरु भस्मीभूत भइरहेका छन् । सारा जगत्को प्रलय भइरहेको छ । यदि यी सारा प्राणीहरुको विनाश भयो भने यिनीहरु कुनै किसिमले पनि यहाँ पुनः उपस्थित हुन सक्ने छैनन् । हजुरले संहारको कुनै अर्को उपाय सोच्नुहोस् जसका कारण यी सारा जीवजन्तुहरु एकसाथ भस्मीभूत नहोऊन् । यदि प्राणीका सन्ततिहरुको विनाश भयो भने समस्त प्राणीहरुको सर्वथा अभाव हुनेछ । यो समस्त चराचर जगत् तपाईंबाट नै उत्पन्न भएको हो । तसर्थ यी सारा प्राणीहरु पुनरावर्तनशील वा मरेर पुनः जन्म धारण गर्न सकून्, मैले हजुरसँग यही वर माग्छु भनेर शिवजीले ब्रह्माजीसँग बिन्ती बिसाए ।
शिवजीको यस किसिमको प्रार्थना सुनेर ब्रह्माजीले मन र वचनलाई संयम गरी क्रोधरुपी अग्निलाई पुनः आफ्नै अन्तरात्मामा लीन गराए । त्यसपछि उनले ‘प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कल्पयामास वै प्रभुः’ (पूर्ववत् १२।२५७।१४) अर्थात् प्राणीहरुका लागि जन्म र मृत्युको व्यवस्था गरे । क्रोधाग्निलाई शान्त गरेपछि उनका सम्पूर्ण इन्द्रियहरुबाट एउटी मूर्तिमयी नारी प्रकट भइन् । उनका वस्त्र काला र राता थिए भने आँखा पनि कालै थिए । उनले दिव्य र अलौकिक आभूषणहरु पहिरिएकी थिइन् । उनी ब्रह्माबाट प्रकट भएर दक्षिण दिशातर्पm गएको ब्रह्मा र शिव दुवैले देखे । त्यसपछि ब्रह्माले तिनलाई मृत्यु भनेर सम्बोधन गरे र तिमीले प्राणीहरुको समयसमयमा विनाश गरिरहनू भनेर आज्ञा दिए ।
ब्रह्माको आज्ञा सुनेर मृत्यु अधर्मद्वारा डराउँदै उनले ब्रह्माजीसँग धर्मानुकूल कर्म गर्ने आज्ञा मागिन् । मैले जजस्को विनाश गर्नेछु तिनका नातेदारहरुले मेरो अनिष्ट चिन्तन गर्नेछन् भन्दै मृत्युले प्राणीहरुको नाश गर्न नसक्ने भएकाले हजुरको कृपाप्रसाद चाहन्छु भनेर ब्रह्माजीसँग अनुरोध गरिन् । अधर्मको भयले पुनः कृपाको भीख माग्दै गरेकी मृत्युलाई रोकेर ब्रह्माजीले उनीसँग यस्तो कुरा व्यक्त गरे– हे मृत्यु ! तिमीले यी प्राणीहरुको संहार गर । यसो गर्नाले तिमीलाई पाप लाग्ने छैन । सनातन धर्म तिम्रो भित्र प्रवेश गर्नेछ । ममात्रै होइन सम्पूर्ण देवताहरु तिम्रो हितमा लागिरहने छन् । यसका अतिरिक्त मैले तिमीलाई अर्को पनि वर दिन्छु । रोगले पीडित भएका प्राणीहरुले तिमीप्रति दोषदृष्टि राख्ने छैनन् । तिमी पुरूषमा पुरूष रुपले, स्त्रीमा स्त्री रुपले र नपुंसकमा नपुंसक रुपले रहनेछौ ।
ब्रह्माजीको यस्तो आज्ञा पाएपछि मृत्युले हात जोडेर ब्रह्माजीसँग मैले प्राणीहरुको संहार गर्दिनँ भनेर बिन्ती गरिन् । त्यसपछि मृत्युलाई सान्त्वना दिँदै कर्तव्यप्रति प्रवृत्त रहन प्रेरित गरे । मृत्यु ! तिमीले मान्छेहरुको संहार गर, तिमीलाई पाप लाग्ने छैन किनकि मैले तिम्रा लागि शुभचिन्तन गरिरहनेछु । मैले पहिला तिम्रा आँखाबाट आँसुका थोपाहरु खसिरहेको देखेँ जसलाई मैले आफ्ना हातमा राखेको छु र तिनै आँसुका थोपा समय आएपछि भयङ्कर रोग बनेर मान्छेलाई कालको गलामा पारिदिन्छन् । सबै प्राणीहरुको अन्तकालमा तिमीले काम र क्रोधलाई एकसाथ नियुक्त गरिदिनू । यसरी तिमीलाई अद्वितीय धर्मको प्राप्ति हुनेछ र तिमीलाई पाप लाग्ने छैन किनकि तिम्रो चित्तवृत्ति सम वा राग र द्वेषले शून्य छ ।
ब्रह्माजीको आज्ञा सुनेर मृत्यु नामकी नारीले आज्ञा नमान्दा ब्रह्माजीको सराप पर्ला भन्ने डरले ‘हजुरको आज्ञा स्वीकार छ’ भनिन् । त्यही मृत्युले नै प्राणीहरुको अन्तिम समय आएपछि काम र क्रोधलाई प्रेरित गरी ती दुवैका माध्यमले मोहमा फसाएर मार्दछ । पहिला मृत्युका जुन आँसुका थोपा झरेका थिए तिनै थोपा रोग भएर देखापरे । तसर्थ हे राजा ! तपाईंले पनि पुत्रका लागि शोक नगर्नुहोस् र यसलाई बुद्धिद्वारा सम्झने प्रयास गर्नुहोस् किनकि ‘सर्वे देवा मत्र्यसंज्ञाविशिष्टा, सर्वे मत्र्या देवसंज्ञाविशिष्टा’ (पूर्ववत् १२।२५८।४०) अर्थात् सबै देवता आफ्नो पुण्य क्षीण भएपछि यसै लोकमा आएर मरणशील हुन पुग्छन् भने मरणशील मान्छे पुण्यका प्रभावले मृत्युपश्चात् देवताका नामले पुकारिन्छन् । स्वर्गलोकमा गएर आनन्द भोगिरहेको हुँदा पुत्रका लागि शोक गर्नु व्यर्थ छ । जन्मपछि मृत्यु अपरिहार्य रहेको हुँदा जीवन रहँदासम्म सुकर्म गरिरहने व्यक्ति मृत्युपश्चात् पनि जीवन्त रहिरहन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरु नै वास्तविक श्रद्धाका पात्र मानिन्छन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर
टेकम्याक्सद्वारा एसोसरिज बजारमा
भरतपुर–२८ को क्वारेन्टाइनमा ५२ जना
दुर्घटनामा सेवानिवृत्त डिएसपीको मृत्यु
भोलिदेखि तरकारी बजार खुल्ने
चितवनमा ७६ वटा नमुनाको रिपोर्ट नेगेटिभ
करेन्ट लागेर दुवै हात गुमाएकी बालिकालाई सहयोग